अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु : कृष्ण लामिछाने (अन्तर्वार्ता ) - Texas Nepal News - Texas Nepal News
अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु : कृष्ण लामिछाने (अन्तर्वार्ता )
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १९:२६
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाको आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवारहरुले चुनावी अभियानलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकाको नेतृत्वको लागि आफूलाई बलियो उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको कृष्ण लामिछाने पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । उनै लामिछानेसँग निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश;-
तपाईको अध्यक्षमा उम्मेदवारी किन ?
अध्यक्षको उम्मेदवारी पोजीसन भन्दा पनि अमेरिकाको एनसीसी सुरुवात देखि नै कुनै न कुनै कालखण्डमा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिदै आएको छ । यो संस्थालाई सर्वमान्य, सर्वपक्षीय र अमेरिकाबासी मात्रै नभएर विश्वका सबै नेपालीहरुले विश्वास गर्न लायक बनाउनका लागि यो संस्थाको विधी विधान र यसको सदस्यता, निर्वाचनमा जुन विवाद र असहज परिस्थितिमा छ त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि मेरो उम्मदेवारी हो । साथै अर्को अर्थमा यी सबै बेथिती र अब्यवस्थित प्रद्धतिलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
एनआरएनए अमेरिकालाई सही ट्रयाकमा ल्याउनको लागि यहाँका एजेण्डाहरु कस्ता छन् ?
उम्मेदवारको आफ्नै चुनावी एजेण्डा हुँदैन। कुनै पनि उम्मेदवारलाई आइसीसीको विधानले नै काम, कर्तव्य अधिकार बारे प्रष्ट लेखेको हुन्छ । यो नेपाल सरकारसँग पनि कनेक्टेड र यूएस सरकारसँग पनि सम्बन्धित भएको कारणले हामी जो–जो उम्मेदवार छौं ती उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र, एजेण्डा भनिरहनु भन्दा पनि विगतमा भएका राम्रा कामहरुलाई समेटेर लाने र अहिले नेपालीहरु जो अमेरिकामा बसेका छन् उनीहरुको समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्ने नै मेरो चुनावी एजेण्डा हो ।
दोस्रो कुरा, हामी चुनावमा भोटका लागि युवा, महिला तथा दोस्रो पुस्ताको कुरा गर्छौ तर हालसम्म युवा, महिला तथा दोस्रो पुस्ताका लागि न एनसीसीले न आइसीसीले त्यस्तो कुनै प्रभावकारी काम गरेको छ । उनीहरुको सहभागिता बढाउँदै प्रभावकारी कामहरु गर्नको लागि म सँग प्रशस्त भिजनहरु छन् । म २० वर्ष देखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्यमा बसोबास गर्छु जहाँ नेपालीहरु ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । यहाँ रहँदा यो अवधिमा मैले विभिन्न सामाजीक संघसंस्थामा रहेर नेतृत्वदायी भूमीका निर्वाह गरिसकेको छु । त्यहाँ युवा भन्दा पनि दोस्रो पुस्ता, विद्यार्थी र महिलाहरुलाई मैले सहभागी गराएर धेरै कार्यक्रमहरु गरेको छु । त्यही अनुभवका कारणले पनि म युवा, दोस्रो पुस्ता, विद्यार्थी तथा महिलाहरुको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्न चाहान्छु ।
एनआरएनए अभियानमा यहाँले हालसम्म पुर्याउनु भएको योगदान बारे बताइदिनुस न ?
सन् २००७ देखी म एनआरएनको आधिकारीक सदस्य छु । सन् २००७ मा सायद त्यो पहिलो नेपाली नागरिकता मस्यौदा समिति बनेको थियो जतिबेला अम्बिका अधिकारी त्यसको चियर हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा टाक्सफोर्समा पनि जम्मा ५ जना राखेको थियो त्यसमध्ये म पनि एक थिए । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा पहिलो ड्राफ्ट नै हाम्रो टिमको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो दिन देखी नै म निरन्तर एनआरएनएमा छु । यसको अलवा एनआरएनएको आइसीसीको विभिन्न टाक्सफोर्सको को–चियर र चियरको रुपमा मैले काम गरिसकेको छु ।
त्यस्तै शंखमूल पोजेक्टको लागि अमेरिकामा मैले चियर भएर काम गरेको छु । शंखमूल परियोजनामा अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी हामीले नै डोनेशन उठाउन सफल भएका थियौ । त्यो मेरै नेतृत्वमा उठेको हो । त्यस्तै, एनआरएन भवन बनाउँदा खेरी पनि अमेरिकामा म आफैले कोडिनेट गरेर त्यो बेला सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । त्यो बेला तत्कालीन आइसिसी अध्यक्ष शेष घले हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कार्यक्रममा आउनुभएको थियो । हामीले अमेरिका भरिमै सबैभन्दा बढी डोनेशन म कोडिनेटर भएको कार्यक्रमले उठाइएको थियो। त्यसपछि म एनसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर भए । म एनसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदा विश्वमै र एनआरएनले नगरेको काम मेरो कार्यकालमा भएको थियो ।
त्यस्तैगरि, मैले नेपाली भाषाको एक कक्षा देखी ६ कक्षासम्म पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने किताब प्रकाशन गरेको छु । उक्त पुस्तक हाल आइसीसीको वेभसाइटमा पनि राखिएको छ । यो भन्दा ठूलो दुरगामी प्रभाव पर्ने काम एनआरएनएको लागि अरु के हुन सक्छ ? आइसीसीले पनि गर्न नसकेको यस्तो काम मैले गरेको छु । आइसीसीले गरेका ठूला प्रोजेक्ट भन्दा पनि ठूलो प्रोजेक्ट हो यो जसले नेपाली भाषा, संस्कृती, धर्म रीतिरिवाज जोड्छ । एनआरएनको मूख्य एजेण्डा र उदेश्य पनि यही हो । अहिले पनि म एनआरएन आइसीसीको भाषा समितिको चियर छु । अहिले फेरि अर्को नैतिक शिक्षा किताब निस्कदैछ जुन ५२ च्याप्टरको नेपाली र अंग्रेजीमा छ । यसको अर्थ हामीले प्रवासमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीको लागि र विशेष गरि दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने काम गरेका छौ । अर्थात मोरल एजुकेशनको काम हामीले गरेका छौ ।
हामीले स्थानीय लेभलमा त धेरै वटा कामहरु गरेका छौ । अहिले साथीहरुले मेम्बरसीप बढाएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा मैले निकै ठूलो कसरत गरेको छु । योगदान शून्य प्राय भएका ब्यक्तीहरुले मिडियाबाजी र भाषण गर्दै हिड्नु कति पनि सुहाउने कुरा होइन । यो कुरा अमेरिकाबासी नेपालीको लागि मात्र नभई सिंगो गैर आवासीय नेपाली समुदायले बुझेको छ ।
चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा हुनुहुन्छ,, मतदाताहरुबाट के–कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
तपाई आफैं हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो पक्षमा माहौल बन्दै गएको छ । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा मैले १६ वटा कार्यक्रमहरु गरिसकेको छु । हालसम्मको तथ्यांक भन्नुपर्दा अन्य उम्मेदवार भन्दा मैले ६० प्रतिशत बढीले नेतृत्व गरिरहेको छु । प्रत्येक राज्यका कार्यक्रमहरुमा मानिसहरुकोे उत्साहजनक रुपमा सहभागि हुनुभएको छ । उहाँहरुले निकै चासोका साथ हाम्रा कुराहरु सुनिरहनु भएको छ । कार्यक्रममा हल बाहिर बसेर सुन्नुभएको छ । भर्याङमा बसेर पनि साथ दिनु भएको छ । उभिएर सुनिदिनु भएको छ ,। अहिलेसम्म अमेरिकामा भएको बेथितिको विरुद्धमा कृष्ण लामिछाने नै एउटा उम्मेदवार हो, सामाजिक प्राणी हो, इमान्दार छ, झुट बोल्दैन, समाजमा गरेर देखाइसकेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ ।
त्यस्तै, कृष्ण लामिछानेले करोडौं उठाएर नेपाल पठाइसकेको छ । करोडौं उठाएर अमेरिकामा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई दुःख पर्दा सहयोग गरेको छ । अमेरिका भरी नै नेपाली स्कुलको सुरुवात कृष्ण लामिछानेले गरेको छ । ड्यालस कम्युनीटीमा विश्कै सबैभन्दा ठूलो मन्दिरको नेतृत्व गरेको छ । नेपालमा भूकम्प जाँदा धेरै चोटी नेपाल गएको छु । बाढी पहिरो तथा आगलागी हुँदा पीडितहरुलाई राहत दिनको लागि उत्तिकै सहभागिता जनाएको छु । यस्तै धेरै पिडाहरुमा मल्लम लगाउँन म पुगेको छु । त्यस कारणले पनि मेरो पक्षमा इमान्दार समाजसेवी सम्पूर्ण साथीहरु म सँग हुनुहुन्छ । गुटबन्दीमा रमाउने मान्छे बाहेक अन्य सबै मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ । एनआरएनएको संस्थापक सदस्यदेखि खगेन्द्र जीसी सम्मका सम्पूर्ण पूर्व सभापतिहरु कृष्ण लामिछानेको समर्थनमा हुनुहुन्छ । साथै जो परिवर्तनकारी हुनुहुन्छ उहाँहरुको हामीलाई पूर्ण साथ र समर्थन छ ।
अध्यक्षमा अन्य उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ , यहाँलाई नै मतदाताले किन चुन्ने ?
अन्य उम्मेदवारहरु टाई लगाएर हिड्नुहुन्छ, मञ्चमा बस्नुहुन्छ, खादामाला लगाउनु हुन्छ । म भुईमा बस्छु, म भुई सफा गर्छु, बाथरुम सफा गर्छु, मान्छे मर्दा लास बोक्न म पुग्छु । बिरामी हुँदा अस्पतालमा सान्त्वना दिन म पुग्छु, । हिजो मात्रै अस्पतालमा बिरामीलाई भेट्न म पुगे । मैले गरेको सामाजिक कामहरुको अमेरिकाबासीहरुले मात्र हैन विश्वभरी रहेका नेपालीहरुले गर्नु भएको मूल्याकंन नै मेरो उम्मेदवारी र मलाई भोट आउने स्रोत हो ।
अन्त्यमा अमेरिकाबासी नेपालीहरुलाई के अपिल गर्न चाहानु हुन्छ ?
अमेरिकाबासी नेपालीहरुलाई मेरो एउटै अपिल छ, तपाईहरुले आजसम्म अमेरिकाको निर्वाचनमा विवाद झै–झगडा, नक्कली मतदाता, नक्कली निर्वाचन परिणाम भनेर जुन कमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यसबाट मुक्त हुनका लागि, सम्पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि र तपाईहरुले चाहानु भएको र तपाईहरु सम्पूर्णको साझा उम्मेदवार म हो । एनसीसीमा परिवर्तनका लागि र त्यहाँभित्र भएका बद्मासीहरुलाई बाहिर निकालेर नेपाली समाजको लागि एउटै साझा संस्था र सबैको प्रिय फुलबारी संस्था बनाउनका लागि मलाई तपाईहरुले मतदान गर्नुहोस् र दुई वर्षमा तपाईहरुलाई शिर निहुराउने काम म गर्ने छैन । ठूला कुरा गरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दिन, संस्थाको सदस्य बनौ बनौ लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्छु । यहाँभित्र रहेको बेथीतिलाई म व्यवस्थित गर्छु र एनआरएनएलाई साझा संस्था बनाउन म लागिपर्छु । यो नै मेरो मतदाताहरुलाई आब्हान हो । धन्यवाद ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च, एकै दिन थपिए ९०७० संक्रमीत, ५४ जनाको मृत्यु
संसद कहिलेसम्म बिजनेस बिहिन बन्ने ? : काँग्रेस सांसद राजभण्डारी
लुम्बिनीमा आज अपरान्ह ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुपर्ने
गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियाले कांग्रेसलाई दुखित बनायो : शेखर कोइराला
झापाका ५५ वडामा काङ्ग्रेसको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन (सूचीसहित)
थप चार जिल्लामा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगियो
बन्दीपुरमा धुव्रलाल प्रधानको जीत सुनीश्चित, ६० प्रतिशत बढी मतदाता प्रधानको पक्षमा
बन्दीपुरबासी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउन आत्तुर छन: धुव्रलाल प्रधान
डुम्रे बजारलाई तनहुँ, लमजुङ र गोरखाको ब्यापारिक केन्द्रविन्दुको रुपमा विकास गर्छु : धुव्रलाल प्रधान, अध्यक्षका उम्मेदवार-बन्दीपुर गाउँपालिका
स्थानीय चुनावका लागि आचारसंहिता लागू
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि आज राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू हुने